Sabtida lumay qof aan Yuhuud ahayn - Rabbi Michael Avraham
Sabtidii lumay dadka aan Yuhuudda ahayn
Jawaabta > Qaybta: Barashada Talmudic > Sabtidii lumay dadka aan Yuhuudda ahayn
Isaxaaq Waxaa la weydiiyay 6 sano ka hor
1) Tawreed waxay naga dhaaftay sabtidii luntay ilaa kuwa aan Yuhuudda ahayn… iyadoo iftiiminaysa magaca macaan ee ay tahay inaan ilaalino xuquuqaha aasaasiga ah ee kuwa aan Yuhuudda ahayn, laakiin kaas oo ah 'Chassidut' nama aynaan waajib ku ahayn…
Tani waxay la xiriirtaa waxa ay kuwa dambe (Hazo'a iyo kuwa kale) ku nuuxnuuxsadeen in toddobada amar ee xitaa kuwa aan Yuhuudda ahayn ay yihiin waxyaabo ku waajib ah 'daacda iyo akhlaaqda'.
Bal eega erayada Maimonides ee ku saabsan cafiska dibiga reer binu Israa'iil ee dilay dibiga dadka aan Yuhuudda ahayn, kaas oo aan sharcigooda u baahnayn…
Gemara ee Sanhedrin ayaa sheegaysa in ay mamnuuc tahay in khasaare loo soo celiyo qof aan Yuhuud ahayn… Rashi waxa uu sharaxay in ay muujinayso in aanu u soo laabanayn amarka soo laabashada, xaalad kastaba waxa jira mamnuuc (haddii aan si kale loo samayn sababta oo ah cidhiidhi Ilaahay ama quduus ka dhigista magaca) ...
Su'aashaydu waxay tahay xeerarkani ma ku beddeli karaan isbeddelka 'daacadnimada iyo akhlaaqda' ee ay dadku aqbaleen? Xaalad uu qof kastaa arko in waxa saxda ah ee la sameeyo ay tahay in uu dib u soo celiyo khasaaraha, sharcigu ma isbedeli doonaa? Waddamada qaarkood waxaa jira xitaa sharciyo (markaas waxaa laga yaabaa inay suurtogal tahay in lagu dhejiyo amarrada Kim 'sharciyada', iyo haddii qof aan Yuhuudi ahayn uu waajib ku yahay inaan ka yaraynno iyaga) ...
Xitaa haddii la yiraahdo waajib ma jiro, waa 'kaliya' akhlaaqda aan Tawreed ahayn, ugu yaraan ma jiri doonto wax waajib ah (xitaa sida uu Rashi sheegay)… Tawreed maaha mid waajib ah laakiin waxaa jirta sabab loo soo noqdo, akhlaaqda waa la aqbalay waqtigeena… mana ahan sabab la xiriirta mitzvah…
rabbaaniyiinta qaarkood waxay qoraan in maanta ay lagama maarmaan tahay in la soo laabto sababtoo ah quduusnaanta magaca… laakiin waxay aniga iila muuqataa ka baxsasho, quduusnimada magaca maaha mid waajib ah, oo si macquul ah ayaa loo ogolaan doonaa oo kaliya marka uu runtii doonayo inuu magaca quduus ka dhigo…
2) Waa maxay macnaha soo noqoshada 'sababta oo ah quduusnaanta Gd' (sida laga soo xigtay sheekooyinka reer Yeruusaalem)… Haddii Tawreed kaliya ma ridin laakiin ay mamnuucday - waa maxay wax khaldan oo ku ammaani lahaa dadka Israa'iil wax iyaga u ah. runtii waa mamnuuc?
Michi Shaqaale Waxaa loogu jawaabay 6 sano ka hor
Runtii, waxaan oggolahay in su'aasha ah in magaca la xurmeeyo ay tahay arrin aan toos ahayn. Fikradayda waxaa jira waajib buuxda in maanta la bixiyo, sida Hameiri qoray. Waxaad ku qortaa inuu sidaas sameeyo dhinaca akhlaaqda ee maaha dhinaca sharciga, aniguna aniga aragtidayda ayaan ka hadlayaa: Kow, maanta waa sharci ee ma aha akhlaaq, mar haddii ay waajib tahay in la soo celiyo a luminta quruumaha sida Yuhuudi iyo isla aayad. Gemara ee BK Lez waxay si cad u sheegaysaa inay lacag u ogolaadeen Israa'iil oo kaliya sababtoo ah ma aysan haysanin XNUMX mitzvos. Midda labaad, xitaa haddii ay meesha ka saarto maxaa dhib ku ah taas?!
Oo waxa aad weydiisay haddii ay ahayd mamnuuc meesha aan ku ogaanay in la ogol yahay mamnuucida ka dhanka ah sharaf-darrada iyo daahirinta magaca, waa bixiyaha. Tani ma aha mamnuuc, laakiin waxay tahay jawaab u ah xaaladda gaarka ah ee quruumaha waagaas, sidaas darteed xataa wakhtigoodii waxaa jiray meel ay dib ugu soo celiyaan quduusnaanta magaca. Tani waa caddaynta in tani aysan ahayn mamnuuc.
Bal tan ka fiirso maqaalladayda ku saabsan quruumaha wakhtigeenna halkan:
Oo ku saabsan hab-dhaqanka ku wajahan dadka aan Yuhuudda ahayn iyo isbeddellada ku dhacaya halkan.
Sida uu sheegay Hameeri way caddahay in ay tahay in la soo celiyo…
Waxaan weyddiisanayaa sida garsoorayaasha aan jidkiisa raacin;
Gemara iyo poskim waxay si cad u yiraahdaan marka laga reebo ka-dhaafitaanka Tawreed waxaa jira mamnuuc arrinka (oo lagu eedeeyay inuu ka yimid Durban), oo xitaa la macaamilay sababtiisa ...
Sida uu sheegay Rashi, ujeedadu waa in aan muujino in aan ka jawaabno eedeynta oo aan ahayn wax kale.
Laakiin kii ku sameeya magaca akhlaaqda - wuxuu u muuqdaa inuu si sax ah u sameeyo wixii ay xikmaddu rabeen inay ka hortagaan, wuxuu ogaaday inuusan u falaynin jannada aawadood.
Marka hore, lagama maarmaan maaha habka Rashi sidoo kale. Waxaa dhici karta in xaaraantu ay tahay in loo sameeyo dastuur u gaar ah ama in ay raalli ka yihiin indhahooda. Laakiin u samaynta akhlaaqda waxay la mid tahay samaynta quduusnimada ee Gd. Anshaxa sidoo kale waxaa nalagu soo rogay Tawreed (wadna waxaad fashay wanaag iyo wanaag).
Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii aad ku saxan tahay in ay jirto mamnuucid in sidaas loo sameeyo akhlaaqda dartiis, ma fahmin sida aad u soo jeedinayso in tan la beddelo. Marka hore, haddii akhlaaqda maanta ay ka dhigan tahay inaad ka jawaabto, haddana waxaad samaynaysaa akhlaaqda darteed waana waxa xaaraan ah. Marka labaad, fududaantooda, xitaa maalintooda, waxay ahayd amar akhlaaqeed, maadaama aragtidaada ay markaas mamnuuc ka ahayd in laga aarguto anshaxa.
Laakiin waxaas oo dhami waa waxyaabo yaab leh. Tan iyo goorma ayaa la mamnuucayaa in la sameeyo wax ka soo horjeeda anshaxa kaliya si loo muujiyo in qofku ku kacayo sharciga? Kuwani waa waxyaabo yaab leh.
Su'aashu waxay tahay ma dhaqanka akhlaaqda ma beddeli karaa…
Tawreed kaliya ayaa ka mamnuucday dadka aan Yuhuudda ahayn dil iyo dhac, sababtoo ah waxaa loo arkayay xaqnimo iyo akhlaaqda, iyo sida dadka aan Yuhuudda ahayn ay ugu heellan yihiin daacadnimada iyo akhlaaqda oo keliya, annaguna iyaga ayaanu u go'nahay, mise weli waa qayb ka mid ah 'wax lagu daray'. "in ay naga go'an tahay oo kaliya dhexdeena (iyo sida uu qabo Rashi xitaa mamnuuc dadka kale, si aan loo qarin)
Ma fahmin waxa dooda ku saabsan tahay. Horaan u sharaxay. Habka akhlaaqda ayaa hubaal ah inuu isbedeli karo. Laakiin haddii aragtidaada Rashi ay mamnuucdo in wax loo sameeyo sababo akhlaaqeed (taas oo si cad u caqli-gal ah fikradayda) markaa ma beddeli doonto sharciga. Waxaa jiri doona waajib akhlaaqeed iyo xaaraan xalaal ah.
Michi Daaran Jawaabta doorashada
Oo laga yaabaa inay mudan tahay in loo codeeyo C? Daaran Jawaabta doorashada
Wanaag bay noqon kartaa Daaran Iran ma halkan? Ku saabsan Horumarka iyo Liberalism-ka Sane (Column 483)
Ma mudan tahay bluff? Daaran Jawaabta doorashada
Luquntooda ayaa laga soo dareerayaa Daaran Ujawaab gaalka maan ogayn.